Willie Obiano, onye isi ọchịchị Steeti Anambra, ekwuona n’ọchịchị ya dị njikere ịrụ ahịa n’ebe dị iche iche na steeti ahụ. A ga-eji akara ngwa ọgbara ọhụrụ were rụọ ahịa ndị ahụ.
Akara ngwa ọgbara ọhụrụ ndị ahụ ga-agunye ihe ndị e ji agbanwu ọkụ latrịk, ụlọ mkpọchi, akara ngwa ndị e ji egbochi ọkụ ọgbugba, akara ngwa ndị e ji ewete mmiri ọn̄ụn̄ụ, yana okporo ụzọ dị mma.
Gọvanọ Obiano kpọkuru ndị ahịa n’Anambra ka ha kwadoo ndị otu APGA, iji hụ n’ọtụtụ ndị ji aha APGA azọ ọkwa ga-enwete mmeri na ntụli aka ahụ a na-akwado ime. O kwuru na nke a ga-enyere ya aka n’ọtụtụ atụmatụ mmepe nke ọchịchị ya ji n’aka ugbu a.
Obiano kwuru n’enyemaka site n’aka ndị azụmahịa dị nnukwute mkpa n’Anambra. Ọ kpọrọ ndị ahịa ka ha na-akwụ ụtụ isi ha n’oge, yana otu kwesiri ekwesi. Nke a ga-eme ka ego na-abata n’akpa gọọmenti, maka ọrụ dị iche iche ga-ewete mmepe n’ọganihu na Steeti Anambra.